Indlu yelizwe yanamhlanje ene-sauna - I-Airbnb
Indlu yelizwe yanamhlanje ene-sauna
Hohen Pritz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguTanja
"Naturidyll Kukuk" -Ikhaya leeholide elinikezelwe ngothando kunye ne-terrace yalo kunye negadi enkulu ene-sauna yomhlaba ibekwe kufuphi ne-Kleinpritzer See.
Izixhobo eziphezulu, zendalo kunye nezanamhlanje ezinendawo yomlilo, igalari evulekileyo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela liqinisekisa induduzo kwaye lenze ikhaya leeholide libe likhaya lakho leeholide eligqibeleleyo.
Ikhaya leeholide lahlulwe ngokweendawo ezimbini: Kumgangatho ophantsi uya kufumana indawo yokuhlala eqaqambileyo nephangaleleyo kunye neyokutyela eneTV enescreen esicaba, indawo yomlilo (ifakwe iinkuni) kunye nebhedi kunye negumbi lokuhlambela langoku elineshawa. Kumgangatho ongasentla kukho indawo yokulala yabantu ukuya kutsho kwabane.
Iifestile ezinkulu kunye noyilo oluvulekileyo lwendlu lunika indawo eyaneleyo kwaye zithembisa iholide epholileyo nangeentsuku ezinamafu. I-terrace enkulu ene-grill ikumema ukuba uphumule (i-grill) ngokuhlwa.
Ummandla / uhambo
Embindini womhlaba wechibi laseSternberg, iKukuk yasemaphandleni entle ibonelela ngendawo egqibeleleyo yokuphumla kunye nokuphumla!
Ukuhamba ngebhayisekile, ukuqubha, imidlalo yasemanzini (iphenyane, ukurenta amaphenyane kunye nokuloba) kunye neendlela ezininzi zokuhamba intaba zibonelela ngezinto ezinomtsalane kwindalo kunye nabathanda ukukhwela intaba.
I-Kleinpritzer See inokufikelelwa kwimizuzu nje emihlanu ngeenyawo kwaye, ukongeza ekupholiseni, unokuhamba nohambo lwesikhephe. Izikhephe zethu zokubhexa kunye namaphenyane amkelekile ukuboleka, ngokuxhomekeke ekufumanekeni.
Ngexesha lokuhlala kwakho siyafumaneka kuwe nanini na ngefowuni okanye nge-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hohen Pritz